Madaxweyne Faroole oo ka hadlay Munaasabadda Ciidda,TFG,Somaliland iyo Xorriyadda….. | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > PUNTLAND, WARARKA	> Madaxweyne Faroole oo ka hadlay Munaasabadda Ciidda,TFG,Somaliland iyo Xorriyadda…..
Madaxweyne Faroole oo ka hadlay Munaasabadda Ciidda,TFG,Somaliland iyo Xorriyadda…..
Tuesday, November 16, 2010 Laaska News
Garowe (Laaska News) November 16,2010.
Madaxweynaha Maamul Goboleedka Puntland Dr Cabdiraxmaan Sh.Maxamed ayaa maanta ka hadlay goobtii fagaarah ciidda ee Garowe ee lagu tukaday salaadda ciidda,waxuuna hambalyo u diray umadda Puntland,soomaalida iyo dhammaan umadda Muslimiinta ah.
Mr.Faroole ayaa ka hadlay arrima badan oo khuseeya Nabadgalyada , TFG da iyo Somaliland.
Shacabka Puntland ayuu ugu baaqay in la adkeeyo Nabadgalyada.
Nabadgalyada waxa xumeeya waa qabyaaladda intaa laga shaqeeyo,Isimada iyo Cuqaasha waxaa looga baahan yahay inay shiriyaan Beelahooda kana waaniyaan qofkii danbi gala inaan la daba socon ,oo loo daayo gacanta dawladda.
Madaxweyne Faroole ayaa mar uu ka hadlayay Budhcad badeeda sheegay,in Puntland hadda gacanta ku hayso dhismaha Ciidan Badeed.
Mr.Faroole ayaa cafis ufidiyay naxaabiis gaaraysa 60 maxbuus.
Madaxweynaha ayaa mar uu ka hadlayay dawladda TFG da ayaa sheegay:
Madaxweyne Faroole ayaa sheegay inay Dawladda Soomaaliyeed ka mid yihiin,kamid noqoshadaasina aysan ahayn in wax loo yeeriyo.
Madaxweyne Faroole ayaa caddeeyay in uusan kasoo horjeedin Magacaabista Raysal Wasaaraha Cusub.
Mr. Faroole ayaa si toos ah uga soo horjeestay magacaabista laba wasiir oo hore agaasimayaal uga ahaa Madaxtooyada waxaana hadaladiisa ka mid ahaa.
Puntland waxay heshay 3 wasiir,laba kamid ah waxaa qaatay( Sh.shariif) oo magacawday oo waxaan arki jiray alaab la kala bililiqaysto ,gaari iyo ninbaa hebek gaari ka bililiqaystay Wasiiro lakala bililiqaysto annagu waligayo ,wax nalakama weydiin,ninbaa xafiiskiisa raggii isaga uga shaqaynayay ka dhigtay annaga nooma jiraan kuwaasi haddaba waa caddaynaynaa Nin xafiiskiisa oo waliba isaga kalsooni u ah oo waliba burbur iyo furfur ku wada Puntland.
Madaxweyne Faroole ayaa ka hadlay Somaliland.
Madaxweyne Faroole ayaa hadaladiisa waxaa kamid ahaa:
Ayaamo dhawayd waa la dhibsaday hadal aan kasii daynay Idaacadaha markaan la hadlay war firxadkiideegaankiina ayay yimaadeen ee qab qabta,qaqabta markaan niri waa la dhibsaday waxaa loo qaatay inaan borobogaamayno,ugama jeedno borobogaan xaqiiq baan sheegnay Maamulkii maamulkaan ka horeeyay ayaa eedda GalGala aasaaskeeda qaybta uweyn ka ah.
Waxaan ka codsanaynaa in Maamulka Somaliland Nabadgalyada qaybtooda ka qaataan,xumaan ugama jeedno,iyagu hadda eeddii hore wax kuma leh laakiin mid dambe yey qaadin.
Waxaan ka codsanayaa in ay Nabad galyada nagala shaqeeyaan.
Wixii khilaaf ah oo noo dhaxeeyana dee bini aadan baan nahay waan ka heshiin karnaa,waanakawada hadli karnaa.
Ma dhici karto in dad aan doonayn dad kale in lagu khasbo,ma dhici karto.
Qof walba niyadiisa iyo rabitaankiisa iyo deegaankiisa in uu u yahay xor,meeshuu rabo kamid noqdo,meeshuu rabo aado,cidduu doono udhiibto ayuu xaq u leeyahay,qof qof khasbi karaa ma jiro.
Mr.Faroole ayaa sheegay “SSC inaysan kasoo dagi karin Puntland”,wuxuuna sheegay in “Malaku jibriil ku qayliyay.”
Tags: Garowe, Madaxweynaha PL, munaasabadda ciidda, News, PUNTLAND, Somaliland, Soomaaliya, ssc
Madaxweynaha Somaliland Mr.A.M.Siilaanyo oo ka hadlay Munaasabadda Ciidda Dagaalkii Kalshaale,Deegaanka Buuhoodle.Warar dheeraad ah